ပလိပ်ပန်ဒါစက်ရုံ ဝန်ထမ်းများ ဘဝအာမခံချက်ရရှိရေးနှင့် စာချုပ်ပါအချက်များ အပြည့်အဝအကောင်အ?? - Yangon Media Group
ပလိပ်ပန်ဒါစက်ရုံ ဝန်ထမ်းများ ဘဝအာမခံချက်ရရှိရေးနှင့် စာချုပ်ပါအချက်များ အပြည့်အဝအကောင်အ??
ပလိပ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇- မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ပလိပ်မြို့ရှိ အမှတ်(၂) ချည်မျှင်၊ အထည်နှင့် အချောကိုင်စက်ရုံ (ပန်ဒါ ချည်မျှင်၊ အထည်နှင့် အ ချောကိုင်စက်ရုံ)မှ လွှဲပြောင်းခံ ဝန် ထမ်းများ၏ ရှစ်လကြာ ထိုင်သပိတ် တောင်းဆို၍ ရရှိခဲ့သော အချက် ၂၈ ချက်ပါ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သ ဘောတူစာချုပ် အပြည့်အဝ အ ကောင်အထည်ဖော်ပေးရေးနှင့် လွှဲပြောင်းခံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဘဝ အာမခံချက် ရရှိရေးအတွက် ဒီဇင် ဘာ ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တရားဝင် ခွင့်ပြုမိန့်တင်ကာ အလုပ် သမား ၃ဝဝ ကျော်က ဆိုင်ကယ်များ ဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။
”အချက် ၂၈ ချက်ပါ အလုပ် ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးသဘော တူ စာချုပ် ချုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ ၂၈ ချက်ကို အလုပ်ရှင်က အပြည့် အဝ အကောင်အထည်ဖော် မပေး ဘူး။ အစ်မနဲ့ ဖိုးချမ်းနဲ့ကို သုံးလ အစမ်းခန့်ပြီးရင် အလုပ်သမားတွေ ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ခန့်အပ်ပေးမယ်လို့ ပြော တယ်။ အလုပ်သမားတွေဘက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လျှော့ပေး တာ အခုအချိန်ထိ ပြန်မခန့်သေး ပါဘူး။ အခုအချိန်ဆို ဆယ်လရှိ နေပြီ၊ သူတို့ဘက်က ဘာမှတိကျတဲ့ အဖြေမပေးဘူး။ အခုဆန္ဒထုတ် ဖော်ပြီး တစ်လစောင့်သွားပါမယ်။ တစ်လအတွင်း ဖြေရှင်းမပေးရင် ဆက်လက် အရှိန်မြှင့် တောင်းဆို သွားမှာပါ”ဟု အမှတ်(၂) အထည် စက်ရုံ ပလိပ်အခြေခံ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း(၁) အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဇာခြည်ဝင်းက ပြောသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ပလိပ်မြို့ ပန်ဒါစက်ရုံဝင်းမှ မန္တလေး မနော်ရမ္မံ လူထုဟစ်တိုင်ကွင်းအ ထိ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် လှည့်လည် ကာ တောင်းဆိုချက်များြေ<ွကးကြော် ၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည်။
”စက်ရုံမှာ EC စာချုပ်လည်း ချုပ်နေကြပါတယ်။ EC စာချုပ်မှာ ပါမယ့် စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်း အားလုံး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လိုက်ကြ တော့လည်း အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဘက်က ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်း ထွန်းညွန့်ရယ်၊ ဒေါ်အေးခိုင်ရယ်၊ သမဂ္ဂက ဒေါ်ညိုမီလှိုင်း၊ ဒေါ်စော ယုမွန်ရယ်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် တွေ၊ အုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့တွေရယ် အား လုံး ညှိနှိုင်းတာ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် မှာ အားလုံးပြီးသွားတယ်။ အားလုံး သဘောတူလို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ကစပြီး ချုပ်တယ်။ အပိုဒ် ၃၃ ပိုဒ်၊ စည်းကမ်းချက် ၅၈ ချက်ပါတဲ့ စာချုပ်ပါ။ စက်ရုံအလုပ်သမား သုံးပုံတစ်ပုံက စာချုပ်ချုပ်ပြီးပါပြီ။ ဥပဒေဘောင်ကို ကျော်လွန်ပြီး လုပ် တာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေထဲက လုပ် တာ၊ ကျော်လွန်သွားတာက လူကြီး တွေရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့် နှစ် ယောက်ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်တာ ပါ။ အဲဒီတုန်းက ဦးကျော်ဌေးတို့ ရှေ့မှာပဲ ပြောခဲ့တယ်။ ပြန်ခန့်ဖို့အ တွက် နှစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်ကို ကြည့်ပြီး ပြန်စဉ်းစားမယ် ပဲ ပြောခဲ့တာ။ အဲဒါကြောင့်ပါပဲ” ဟု ပန်ဒါကုမ္ပဏီအထွေထွေမန်နေ ဂျာ ဒေါ်တင်တင်ဆွေက ပြော သည်။
အမှတ်(၂) ချည်မျှင်၊ အထည် နှင့် အချောကိုင်စက်ရုံအား ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလက ပန်ဒါကုမ္ပဏီကို ငှားရမ်းပေးခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇန်န ဝါရီ ၁ ရက်တွင် လျော်ကြေးပင်စင် ပေး၍ အဆိုပါစက်ရုံမှ ဝန်ထမ်းများ သည် အစိုးရဝန်ထမ်းဘဝမှ ပုဂ္ဂလိ က ဝန်ထမ်းဘဝသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အ လုပ်သမား ပဋိပက္ခများ၊ ပြဿနာ များ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိပြီး ယနေ့ထိ အဆုံးသတ် နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။